... के भयो अहिले ? | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
… के भयो अहिले ?
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार ११:४१
म नुवाकोटको भैंसेमा बस्छु । अहिले २३ वर्षको भएँ। पुरानो माइक्रो किनेपछि अब म पनि पैसा कमाउँछु, भविष्य बनाउँछु भनेर योजना बुनेको थिएँ । तर ती सबै योजना फेल भए । सपना देखे जस्तो भयो ।
म सानैदेखि मामाघरमा हुर्केको हुँ । मेरो बुबाआमा दुवै हुनुहुन्न। मेरा दिदीबहिनी दुवैले विवाह गरिसकेका छन् । मलाई सम्झना भएदेखि बुबाको अत्तोपत्तो छैन। आमा हामीहरुलाई मामाघरमा छोडेर अर्कैसित जानुभयो।
मामाघरको बुबाआमाले पनि हामी तीन जनालाई कसरी पढाउनु हुन्थ्यो र ? त्यसैले, पाँच कक्षासम्म पढें । अनि पैसा कामाउन काठमाडौं गएँ । पछि काठमाडौंबाट साथीहरुसँगै भारत गएँ । त्यहाँ पाँच वर्ष होटेलमा काम गरें । भारतमा पनि बस्न मन लागेन । अर्काको देशमा कति काम गर्नु जस्तो लाग्यो। कमाइ पनि राम्रो थिएन। त्यसैले नेपाल फर्किएँ ।
काठमाडौं आएर गाडी चलाउन सिकें । त्यसपछि मैले स्कूलको गाडी चलाउन पाएको थिएँ । कमाइ ठिकै हुन्थ्यो । बचत धेरै हुन्न थियो । तैपनि तीन वर्ष जति चलाएँ । त्यो बेला मनमा अर्कोको गाडी चलाउनुभन्दा आफ्नै गाडी चलाउनुपर्छ भन्ने विचार आयो । आफ्नो गाडी भयो भने आफै खट्दा र मिहेनत गर्दा केही कमाउन सक्छु जस्तो लाग्यो । त्यसैले मैले सस्तोमा, तीन लाख जतिमा माइक्रो पाएँ र ऋण गरेर भए पनि किन्छु भन्ने योजना बनाएँ । माइक्रो किनें पनि । दिदीले एक लाख ऋण खोजी दिनुभयो ।
माइक्रो किनेपछि रिंगरोडको रुटमा चलाएँ । मैले माइक्रो किनेको दुई दिनपछि नै लकडाउन भयो। मैले एक दिनभन्दा बढी माइक्रो चलाउन पाइनँ। माइक्रो किन्दा स्कूलबाट आएको पैसाले छिटै ॠण तिर्छु । स्कूलको गाडी चलाउनु नपरेका बेला माइक्रो चलाउँदा आफ्नो खर्च टर्छ भनेर योजना बनाएको थिएँ । तर सबै योजना र सपना टुटे । यस्तो होला भनेर कल्पना पनि गरेको थिइनँ । कोरोनाबारे सुनेको पनि थिइनँ ।
अहिले फेरि धेरै वर्षपछि गाडी लिएर मामाघर आएको छु। मेरो गाडी नचलाई राखेकोले बिग्रेको छ। पुरानो माइक्रो किन नबिग्रोस् त ? अहिले एक पैसा नि छैन। अलि अलि भएको पनि सबै गाडीमा गयो।
मामाघरमा हजुरआमाले यताउता सरसापटी गरेर घर खर्च टार्नु भइरहेको छ । दिन बिताउन पनि गाह्रो लाग्न थालेको छ। अहिले गाउँमा मेलापात गर्ने बेला छ तर काम गर्न कसैले बोलाउँदैन। काम गर्न सक्दैन भनेर हो कि वा ड्राइभरलाई काम गर्न के आउला भन्ने सोचेर हो कि ? आफ्नो माइक्रोको ताल देख्दा पिर लाग्छ। गाडीको साहु भएर के गर्नु गाडी नै चलाउन पाको छैन । त्यो बेला गाडी नकिनेको भए नि आनन्द हुन्थ्यो । कस्तो बेला गाडी किन्न पुगेछु । कहिले खुल्ने हो, कहिले चलाउन पाउने हो ? दिक्क लागिसक्यो ।